Nezve Musangano Wako Unotevera | Martech Zone
NezveMusangano Wako Unotevera
Chitatu, Kukadzi 17, 2010 Svondo, June 28, 2015 Douglas Karr
Ndanga ndichifunga zvakawanda nezve misangano nguva pfupi yadarika. Seti post ya zviitiko zvegore negore zvekambani akandikurudzira kuti nditange kuumba iyi posvo. Semunhu ane bhizinesi remushandi mumwe chete, ndinofanira kunyatso chenjera kuti mangani mamisangano andinopinda ayo asiri ekutsigira mari.
Zuva rega rega, ndinokokwa kumusangano - kazhinji mukombe wekofi kana masikati. Yakawanda yenguva, ivo hukama hwehunyanzvi kana hwakatungamira saka hazvisi-zvinowanisa mari nhasi, asi mangwana zvinogona kutungamira kune chimwe chinhu. Iyi misangano inonakidza zvisingaite… kazhinji kufunga kana kuronga nezvekambani, kushambadzira kwavo, kana tekinoroji iri kuwedzera.
Izvo zvakasiyana zvakanyanya kubva pandakamboshanda kumakambani makuru aiita misangano zuva nezuva, zvakadaro. Misangano kumakambani inodhura, inovhiringidza kugadzirwa, uye kazhinji inoparadza nguva. Heino mhando yemisangano inokuvadza tsika yebhizinesi:
Misangano inoitwa kutsvaga kubvumirana. Mikana ndeyekuti iwe wakashandira mumwe munhu ane basa rekuita kuti basa riitwe. Kana iwe uchibata musangano kuvasarudzira… kana zvakatonyanya ... kutora danho kubva kwavari, urikukanganisa. Kana iwe usingavimbi nemunhu kuti aite basa racho, vape basa.
Misangano yekuparadzira kubvumirana. Izvi zvakatosiyana zvishoma… zvinowanzoitirwa neanotora sarudzo. Haana chivimbo nesarudzo yavo uye anotya pamusoro pemhedzisiro. Nekuita musangano uye kuwana kubvumirana kubva kuchikwata, ivo vari kuyedza kuparadzira mhosva uye kudzikisira kuzvidavirira kwavo.
Misangano yekuita misangano. Hapana chinhu chakaipisisa kupfuura kukanganisa zuva remumwe munhu kumusangano wezuva nezuva, wevhiki nevhiki kana wemwedzi uko pasina chirongwa uye hapana chinoitika. Iyi misangano inodhura zvisingaite kukambani, kazhinji ichidhura zviuru zvemadhora.
Musangano wega wega unofanirwa kuve nechinangwa chisingakwanisike kuzvimiririra… pamwe kufunga, kutaura meseji yakakosha, kana kuputsa chirongwa nekupa mabasa. Yese kambani inofanirwa kuita mutemo - musangano usina chinangwa uye ajenda inofanirwa kurambwa neakakoka.
Makore mazhinji apfuura, ndakaenda kuburikidza nekirasi yehutungamiriri uko kwavakatidzidzisa maitiro emisangano. Izvo zvinogona kunge zvinonakidza, asi mari yemisangano kumasangano makuru yakakosha. Nekugadzirisa musangano wega wega, wakachengetedza mari, nguva, uye nekuvaka zvikwata zvako pane kuvakuvadza.
Misangano yechikwata yaive nemutungamiri, a munyori (kutora zvinyorwa), a muchengeti wenguva (kuona kuti musangano wanga uri panguva), uye a muchengeti wesuo (kuramba uri pamusoro wenyaya). Muchengeti wenguva uye muchengeti wesuo aichinja musangano wega wega uye aive nemvumo izere yekushandura misoro kana kupedza musangano.
Iwo ekupedzisira maminetsi gumi kana kupfuura emusangano wega wega akashandiswa kugadzira Chirongwa cheNhanho. Iyo Action Plan yaive nemakoramu matatu - Ndiani, Chii, uye Rini. Zvakatsanangurwa muchiitiko chega chega ndechekuti ndiani aizoita basa racho, zvaiyerwa zvaiburitswa, uye vaizoiwana riini. Raive basa revatungamiriri kuita kuti vanhu vazvidavirire pane zvakawiriranwa pane zvaizoburitswa. Nekuisa iyi mirau yemisangano, taikwanisa kuchinja misangano kubva pakuva inokanganisa ndokutanga kuiita kuti ibudirire.
Ndinokupikisa kuti ufunge nezve musangano wega wega wauri kuita, kungave kuri kuwana mari, kungave kune zvibereko, uye nemabatiro auri kuzviita. Ini ndinoshandisa Karenda kuronga misangano yangu uye kazhinji ndinoshamisika kuti mangani misangano yandaizove nayo kana iwe uchifanira kubhadhara muripo nekadhi rechikwereti kuti uronge! Dai iwe waifanirwa kubhadhara musangano wako unotevera kubva muhoro yako, ungadai uchiri nawo here?
Tags: calendlyMisanganozvikonzero zvemisanganokuronga
Sefa Subdomains muGoogle Analytics
Doug, ndinoda kuronga musangano newe kuti tikurukure izvi zvimwe. 🙂
Ini ndakambonzwa mumwe nyambo achitaura kuti misangano yaizoenda heckuva yakawanda nekukurumidza mumakambani eAmerica kana murongi akangotanga musangano nekukumbira munhu wese kuti asimudze ruoko kana vachiri kushanda pane chero chinhu chavaishandira nezuro.
Kukadzi 20, 2010 na12: 26 PM
Anotyisa post! Iyo "misangano yese inosarudzika" uzivi chaicho chinongedzo cheROWE, iyo kambani yangu yanga ichinakidzwa kwemakore akati wandei ikozvino. Saka vazhinji vedu tinoisa kukosha pazvinhu zvisiri izvo, se "nguva yenguva", kana kuzadza chigaro panguva yakatarwa. Misangano uye nguva yekumeso yakakura uye ine kukosha mune chaiyo mamiriro asi isu hatifanire kutendera zvinhu izvi kuti zvitipe kunyepedzera kwekugadzira kana zvisina musoro.